ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် လေးဘီးလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အသစ်အား လမ်းပေါ်တွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
ဖင်လန်နိုင်ငံ ဟယ်လ်စင်ကီမြို့ မြင်ကွင်း (ဆင်ဟွာ)
ဟယ်လ်စင်ကီ၊ မေ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖင်လန်နိုင်ငံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အာဏာပိုင်များသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မလိုအပ်သော လေးဘီးလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အမျိူးအစားအသစ်အား လမ်းမပေါ်တွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း ဖင်လန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး အေဂျင်စီ (Traficom) က မေ ၂၀ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ Scouter Mobility မှ ထုတ်လုပ်သော လူနှစ်ဦးစီးနင်းနိုင်သည့် မော်တော်ယာဉ်သည် တစ်နာရီလျှင် ၂၅ ကီလိုမီတာ မောင်းနှင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ စက်ဘီးစီးနင်းခွင့်ပြုထားသည့် နေရာတိုင်းတွင် ၎င်းယာဥ်အားအသုံးပြုနိုင်ပြီး ယာဥ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းနှင့် တာဝန်များမှာ စက်ဘီးနှင့်ပတ်သက်သည့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သို့သော် ၎င်းယာဥ်သည် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အာမခံရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း Traficom ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Scouter သည် အန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်လွှတ်ပစ္စည်းမပါဝင်သည့် ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း Traficom က ပြောကြားသည်။
Scouter သည် ဖင်လန်နိုင်ငံ၌ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစားကိုရရှိသော ပထမဆုံး L-class လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း Traficom မှ ပညာရှင် Jukka Juhola က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖင်လန်၏ ခွင့်ပြုချက်အား အခြေခံ၍ ၎င်းယာဉ်အား ဥရောပရှိအခြားဒေသများတွင် လမ်းအသွားအလာအတွက်လက်ခံနိုင်ကြောင်း Juhola ကဆိုသည်။
“လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကုန်စည်များနဲ့ ခရီးသည်များအတွက် ခရီးတို သွားလာနိုင်ဖို့ ဖန်တီးထားတဲ့ ပေါ့ပါးရိုးရှင်းတဲ့ နည်းပညာဖြေရှင်းချက်လိုအပ်နေပါတယ်’’ Scouter Mobility မှ တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) Petri Pitkanen ကပြောသည်။
“ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သုည ရှိတဲ့အပြင် ရိုးရှင်းမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အဓိကဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။’’ ဟု Pitkanen ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ မြို့ကြီးများနှင့် အပန်းဖြေနေရာများတွင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိရန် Scouter အမျိုးအစား ဖြေရှင်းမှုနည်းပညာကို လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
မော်တော်ယာဉ်၏ လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်မှုအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများကို ဖင်လန်နိုင်ငံ နည်းပညာသုတေသနစင်တာ (VTT) က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Finland approves new 4-wheel electric vehicle for road use
HELSINKI, May 20 (Xinhua) — Finland’s transport authorities have approvedanew type of four-wheel electric vehicle that requires no driver’s licence for road use, the Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) said inapress release on Thursday.
Produced by the Finnish company Scouter Mobility, the two-seater vehicle’s maximum speed is 25 kilometers per hour. It can be used wherever bicycles are allowed and shares the same traffic rules and liabilities as those for bicycles. However, it must have standard transport insurance, according to Traficom.
The Scouter isanew mobility solution without harmful emissions, Traficom noted.
Jukka Juhola, an expert at Traficom, said in the press release that the Scouter was the first electric L-class vehicle to receive European Union type approval in Finland. “This means that the vehicle can be accepted for road traffic elsewhere in Europe on the basis of the Finnish approval,” Juhola said.
“Road transport lacksalightweight solution designed to make short journeys with goods and passengers,” said Petri Pitkanen, founder and chief executive officer (CEO) of Scouter Mobility.
“In addition to zero emissions, simplicity, safety and fun have been our key design criteria,” noted Pitkanen, adding that Scouter-type solutions are needed to achieve the carbon neutrality goals of cities and resorts.
The technical tests for the vehicle’s electric transmission were carried out by the Technical Research Centre of Finland (VTT). Enditem